Atileet Ganzabeen Dorgommii Mana Keessaa Ispeen Injifatte - ! - OBN
Atileet Ganzabeen Dorgommii Mana Keessaa Ispeen Injifatte
[OBN 02 06 2010] Atileet Ganzabee Dibaabaa dorgomii fiigicha mana keessaa Ispeen Maadriiditti qophaa'e injifatte.
Atileet Ganzabeen dorgommii meetira 1500 kana daqiiqaa 4, sakandii 02 fi maaykiroo sakandii 43n galuun tokkoffaa baatet injifatte. Federeeshiniin Waldaa Atileetiksii Idil Addunyaa dorgommiiwwan barana qopheessu 6 keessaa kan kaleessa Ispeenitti dorgommame isa sadaffaadha.
Dorgommiin jalqabaa Amajjii 26,2010 Jarman magaalaa Kaarlisiruuhitti kan dorgommame yammuu ta'u, lammaffaanis Jarman magaalaa Duusiildoorfitti dheengadda dorgommamera.
Dorgommii kaleessaa kanarratti Ganzabeetti aanuun lammiin Jarman Koonistaanzee Koolistaar 2ffaa, atileetin Briiteen Eeliish Maakloogaan 3ffaa, lammiin Moorookoo Raabeeb Araafiin 4ffaa, atileetin Itiyoophiyaa Aksuumaawiit Ambaayeen ammoo 5ffaa jirti. Ganzabeen magaalaa Kaarlisiruuhitti meetira 1500n daqiiqaa 3, sakandii 57 fi maayikiroo sakandii 45n injifachuun ishii ni yaadatama.
Atileet Ganzabeen maayila 1 fi 2n, meetira 1500, meetira kuma 3 fi 5n dorgommii mana keessaan riikardii qabdi. Dorgommiiwwan itti aanan guyyoottan 18n dhufan keessatti Ameerikaa Boostan, Poolaand Tooruunii fi Iskootlaand Gilaaskoowitti kan dorgommamu ta'a.
471 Views 2/9/18